SomaliTalk.com » 2013 » June » 14
Home » Archive Maalinta June 14th, 2013
oo martiqaad rasmi ah ka helay Ra’iisul Wasaaraha UK David Cameron si uu uga qeybgalo xafladda loo sameynayo Boqortooyada Ingiriiska ee 15ka Juun oo ku beegan maalintii ay dhalatay iyo shirka hordhaca ee G8 ee Sabtiga 15ka Juun 2013. Read More →
Boqolka halaagsamay halka ka badbaaday bilaan noqday!
Dad ka dhaadhiciya inay TAHRIIBAAN oo isugu jira qandaraaslayaal iyo dhoohanayaal bilaash ku shaqeeya ayaa jira. Waxaa dabayaal kuwo dalkooda ka xarraasa oo geeya “meel daran iyo reero muskood”. Waa meel aan talo faro ugu jirin oo yeelis mooyee aysan diidmo lahayn. Dhalinyarada markii lagu hubsado gacanta kooxaha qawlaysatada ah waxay markiiba isu badalayaan MAFAACIIL halkay awal faaciliin...
W/Q Ahmed Mohamed Roble Hordhac Allaah ayaa mahad oo idil iska leh, nabadgalyo iyo naxariisina Nabigeena Muxammad ah korkiisa Allaha yeelo. Diinta islaamka Cadaalada waxa ay kaga jirtaa door muhiim ah Waa mowduuc aad u weyn oo xiriir la yeelanaya dhaqaalaha, bulshada, hogaanka iwm. waxaana lagu sheegay quraanka & sunaha sidoo kale waxaa jira aayado iyo xadiisyo badan oo kusoo arooray in cadaaladu...